भर्खरै फेरी गयो भूकम्प – PanchKhal Online
Home/समाचार/भर्खरै फेरी गयो भूकम्प
काठमाडौं, जेठ १६ । मुगु केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव ६ म्यानेच्युटको भूकम्प गएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार मुगुको जिमा केन्द्रबिन्दू भएर बिहीबार बिहान १० बजेर १ मिनेटमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो।
भूकम्पको धक्का मुगु आसपासका क्षेत्रमा पनि महसुस गरिएको थियो। २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्पपको धक्का अझै रोकिएको छैन।
चुनावताका ओलीजीले जनतालाई दिएको आश्वाशन उहाँलाई जनताले पूरा गर्न दिनु परेन ? पूरा गर्न दिए न गर्ने हो ? देश बनाउने युवाहरुले त प्रधानमन्त्री सामुं गएर भन्नु पर्यो ल भन्नुस देश बनाउन हामीलाई के काम दिनु हुन्छ भनेर । कमसे कम सरकारलाई पांच बर्ष त काम गर्न दिनु पर्यो नि । देश बनाउनु भनेको दालभात, तरकारी पकाएजस्तो हो र ? दालभात पकाउन त् दुई घण्टा तीन घण्टा लाग्छभने चुट्कीको भरमा देश बन्छ ? सरकारलाई काम गर्ने दिईएको छैन, नत्र ओलीजीले देश बनाएर देखाई दिनु हुन्छ । मलाई पूरा विश्वाश छ, त्यत्ति गरेनन भने ती नेता नै हैनन् । हैनभने तिनले चौध बर्ष जेल बसेको त धिक्कार हुन्छ । यदि यिनले पनि गरेर देखाउनु सकेनन भने यो देश बन्दैन ।-स्वदेशनेपाल डटकमबाट